चितवनकी २३ वर्षीया सुजिताको हत्या कि आत्महत्या ? – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
चितवनकी २३ वर्षीया सुजिताको हत्या कि आत्महत्या ?
२२ असार, २०७८ ०९:१२ मा प्रकाशित
काठमाडौं – ९ दिनअघि घरबाट निस्किएकी चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ की २३ वर्षीया सुजिता भण्डारीको शव घरबाट करिब ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको जंगलमा भेटिएको छ ।
सुजिताकी दिदी कविताका अनुसार अघिल्लो दिन साँझ उनले साथीको घर सब्जी लिन जाने सुनाएकी थिइन् । बिहान कविता उठ्दा बहिनी घरमा थिइनन् । उनले सोचिन्, ‘सुजिता सब्जी लिन गइछे ।’
‘बिहान ५ बजे खेतमा जान उठेका बेला हेर्दा छोरी सुतिरहेकी थिइन्,’ सुजिताका बुबा यज्ञप्रसाद भन्छन्, ‘बहिनी ६ बजे उठ्दा चाहिं उनी थिइनन् ।’ यही बयानको आधारमा प्रहरीले सुजिता साढे ५ देखि सवा ६ बजेको अवधिमा घरबाट निस्किएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
दिउँसो १२ बजेतिर कविताले मोबाइल हेर्दा बहिनीको ‘मिस कल’ आएको थियो । उनले फोन फर्काइन्, सुजिताले हतास मनस्थितिमा उठाइन् ।
‘मलाई आँखामा पट्टी बाँधेर गाडीमा हालेर राखेका छन् । म अपहरणमा परें ।’
‘कता लैजाँदैछन् ?’ दिदीले एसएमएस गरिन् । कविताको एनटीसी नम्बरमा १२:४४ र १२:४२ मा एसएमएसको जवाफ आएको छ, ‘पूर्वतिर ।’ त्यसपछि सम्पर्क टुट्यो । उनले बुबाआमालाई खबर गरिन्, प्रहरीलाई पनि सुजिता अपहरणमा परेको भनियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका एसपी ओमप्रसाद अधिकारीका अनुसार सुजिता अपहरणमा परेको खबर दिउँसो १२ बजेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय, भण्डारामा आएको थियो । लगत्तै प्राविधिक विश्लेषण थालेको प्रहरीले उनी हराएको भनिएको क्षेत्रमा सोधपुछ र निगरानीलाई पनि एकसाथ अघि बढायो ।
कवितालाई फोनमा दुई जना महिला र एक जना पुरुषले ट्याक्सीमा हालेर अपहरण गरेको भनिएको थियो । तर हराएको क्षेत्र आसपासमा बस्ने व्यक्तिहरुले कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि नदेखेको प्रहरीलाई बयान दिए । त्यसक्षेत्रमा सीसी क्यामरा पनि थिएन ।
अपहरणमा परेको भए फिरौतीका लागि फोन आउनसक्थ्यो । परिवारलाई त्यसबारे जानकारी गराएर प्रहरी अपहरणकारीको फोन कुरिरहेको थियो । तर कुनै शंकास्पद फोन आएन ।
अधिकांश अपहरणका पछाडि मुख्य कारण फिरौती असुली हुने गर्छन् । सुजिता प्रकरणमा ‘अपहरणकारी’ले कुनै माग राखेका थिएनन् । न त परिवारलाई सम्पर्क गर्ने कोशिश नै गरेका छन् ।
कतिपय अपहरणका घटना व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण हत्या गर्ने उद्देश्यले भएका हुन्छन् । प्रहरीले यो ‘मोटिभ’तर्फ पनि अनुसन्धान नगरेको होइन । ‘परिवार एकदमै निम्न वर्गीय हो, पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘फेरि परिवारको कसैसँग रिसिइबी रहेको पनि देखिएको छैन ।’
च्याउ खोज्न गएका स्थानीयले वनको बीचको झ्याङमा अड्किएको अवस्थामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओमप्रसाद अधिकारीका अनुसार शव भेटिएलगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको थियो, शव अपहरणमा परेकी भनिएकी सुजिताको हुनसक्ने आशंका गरियो ।
यदि आत्महत्या नै गरेको मान्ने हो भने यसको कारण प्रेम सम्बन्धको विषय हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकृतहरु अनुमान गर्छन् । तर प्रहरीले यी सबै आशंकालाई प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्नेछ र आत्महत्या देखिए दुरुत्साहनको मुद्दा चल्न सक्नेछ ।
दुई बुँदे सहमतिपछि सुजिताको शव अस्पतालमा
काठमाडौं – जिल्लाको राप्ती नगरपालिका–३ बाट सुजिता भण्डारीको शव भरतपुर अस्पतालमा लगिएको छ । प्रशासन र स्थानीयबीच दुई बुँदे सहमति भएसँगै शव लैजान गरिएको अवरोध हटेको र शवलाई अस्पताल पुर्‍याइएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बताए ।
उनका अनुसार घटनाको यथाशीघ्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
पीडित पक्षले २४ घण्टाभित्र दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म सुजिताको शव लैजान नदिने अडान राखेका थिए ।
तर पोष्टमार्टम नभएसम्म मृत्युको कारण नखुल्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनै समस्या हुने भएपछि शव अस्पताल लैजान दिने सहमति भएको थियो ।
भण्डारीको परिवार निम्न मध्यम वर्गीय हो । सुजिता हराएको दिन पनि उनका बुबाआमा बिहानै खेतमा गएका थिए ।
बिबीएस चौथो बर्षको परीक्षा दिएर बसेकी सुजिता गाउँतिर अरुसँग खासै धेरै नबोल्ने स्वभावकी रहेको स्थानीय निर्देशन त्रिपाठी बताउँछन् ।
‘हाम्रो खेत र उनको घर एकैठाउँमा छ, खासै धेरै नबोल्ने उनी सोझी थिइन्’ त्रिपाठीले भने, ‘उनलाई कसैले किन अपहरण गर्‍यो र किन हत्या गर्‍यो भन्ने केही भेउ पाउन सकेको छैन ।’
सुजिताकी दिदी कविताले पनि सधैँ एकैठाउँमा हुँदा समेत बहिनीको कुनै केटासँग सम्बन्ध रहेको जानकारी नभएको बताइन् ।
भण्डारी परिवारमा चार छोरी र एक छोरा छन् । जेठी र महिली दिदीको विवाह भैसकेको छ ।